Antony 5 Ny ekipan'ny varotrao dia tsy mahatratra ny quota | Martech Zone
Zoma, Jolay 17, 2015 Douglas Karr
Qvidian dia namoaka ny Tatitra fironana fanatanterahana varotra ho an'ny 2015 ary feno statistika manerana ny departemanta fivarotana izay tokony hanampy anao amin'ny famaritana ny fahombiazan'ny varotrao manoloana ny valiny.
Ireo fikambanana amin'ny 2015 dia manao fanovana ifotony mankany amin'ny fitomboana mahery vaika. Ireo mpitarika ny varotra dia tokony hifantoka amin'ny fanaovana izay hahombiazan'ny ekipany amin'ny alàlan'ny fijerena mihoatra ny fahafaha-manao varotra tetika sy ny fanomezana hery ny herin'ny varotra amin'ny famonoana stratejika hatramin'ny farany.
Satria manery ny fampitomboana ny tahan'ny fandresena sy ny fanatsarana ny fahazoana quota ny sampana fivarotana, misy antony 5 lehibe tsy ahazoana quota:
42% ny fotoana nifarana tamin'ny tsy misy fanapahan-kevitra.
41% ny fotoana nifarana satria ny varotra dia tsy afaka mampita soa aman-tsara ny soatoavina.
36% ny fotoana very satria very ny varotra mavesatra amin'ny andraikitra ara-pitantanana hafa ary tsy mandany fotoana amin'ny fivarotana.
36% ny fotoana very satria maharitra loatra ny fametahana ireo repoblika.
30% ny fotoana very satria satria ny mpitantana ny varotra dia tsy afaka nahavita nampianatra nahomby tamin'ny repres.
Misy fomba fijery tsara ao ambadik'ireto isa ireto!
Raha toa ka tsy mifarana amin'ny fanapahan-kevitra ny orinasa dia ilaina ny mikolokolo bebe kokoa izany fifandraisana izany amin'ny automatisation marketing, marketing amin'ny mailaka, ary ny hetsika ary ny fahafaha-manangana fifandraisana hafa.
Raha tsy mahomby ny varotra mampita ny lanja, ny fikarohana voalohany sy faharoa dia ampiarahina amin'ny taratasy fotsy, ny fandinihana tranga ary ny fijoroana vavolombelona dia tetikady ilaina amin'ny marketing.
Raha may ny asa aman-draharaha hafa ny varotra, tena zava-dehibe ny mandeha ho azy amin'ny varotra - manomboka amin'ny antso an-tariby ka hatrany amin'ny fitantanana ny tolo-kevitra.
Ary raha ny fanamafisana ny varotra reps sy ny coaching dia manondro ny fahafaha-manaon'olombelona sy ny fotoana ahafahana mampianatra ao anatin'ny fikambanana.
Ny infographic dia mahita hafa fa ny varotra sy ny marketing dia tokony hifantoka akaiky - indrindra hahatakatra ny fizotran'ny fividianana mpanjifa. Raha ny ankamaroan'ny mpanjifa mijery ny lantonoara, Mino aho fa tsy azon'izy ireo ny isan'ny antony iainana eo amin'ny tontolo iainana izay misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana - izay mifantoka amin'ny fananganana fahatokisana sy fahefana miaraka amin'ny fanantenana.
Avy any Qvidian
The Fironana fanatanterahana varotra ny tatitra dia mampiseho fa na dia ny ankamaroan'ny fikambanana ankehitriny aza dia mihetsika manomboka amin'ny fitomboana malina ka hatrany amin'ny fitomboana mahery vaika, ny sakana toy ny rep dia mirongatra, ny tsy fisian'ny fizotran'ny fividianana natao manokana sy ny atiny ary ireo rafitra tapaka izay voafetra Analytics dia miara-miasa manimba ny farany, manakana ny fahazoana quota ary misoroka ny fitomboana maharitra. Mba hahatratrarana ireo fanamby ireo dia tsy maintsy manatsara ny sehatra lehibe amin'ny tsingerin'ny varotra ny fikambanana mba hananganana, hanatanterahana ary hanatsarana ny laharam-pahamehana amin'ny varotra.
Tags: 2015dia ny mpanjifa mividyfizotry ny fividianana mpanjifaquota tsy hitaquota varotra tsy hitaqvidianantony fivarotanavarotra mandeha ho azyFanamafisana ny varotrafanatanterahana varotraFironana fanatanterahana varotraTolo-kevitra momba ny varotraquota varotra
Ny fahasosoran'ny marketing amin'ny orinasam-barotra
Jul 19, 2015 amin'ny 8: 29 AM
Antontan'isa tena lehibe izay mety hitarika amin'ny fahombiazana azo antoka kokoa. Hanampy ahy hanova ny fifantohako izany ary handray fanapahan-kevitra mahitsy kokoa.
Dec 16, 2020 amin'ny 1: 10 AM
Lahatsoratra Insightful. Rehefa niasa tao amin'ny ekipa mpivarotra nandritra ny fotoana ela aho dia azoko ireo teboka izay nasongadinao. Miombon-kevitra amin'ny hevitrao momba ny fampiharana ny automatisation varotra aho. Hanampy ahy handray fanapahan-kevitra tsara momba ny varotra izany.
23 Jan 2021 amin'ny 8:37 PM
Ekeko fa ny tsy fahampian'ny fandraisana fanapahan-kevitra haingana dia iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny ekipa mpivarotra tsy hahatratra ny tanjon'izy ireo. Efa hitantsika io matetika. Fanapahan-kevitra haingana no vahaolana. “Ny fotoana no vola!”